Kordhi waxsoosaarka emaylka qaab khad la'aan ah | Blog MarTech
Talaado, Janaayo 25, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Michael Reynolds
Inta badan dadka i garanaya way ka warqabaan jacaylkayga Sibedhka Aaladda. Markii ugu horeysay caan ka dhigay Merlin Mann, Inbox Zero waa qaab lagu maareeyo emaylkaaga oo sanduuqaaga madhan looga dhigo. Waa wax weyn wax soo saarka emaylka nidaamka. Waan qaatay fikradaha, xoogaa waan ka sii dardaarmay, oo waxaan ku daray xoogaa maroojin cusub. Aniguba waxbaan baraa fadhiyada waxbarashada ee ku saabsan wax soo saarka emaylka si joogto ah.
In kasta oo aan ahay taageere weyn, haddana qof walbaa diyaar uma aha inuu raaco inuu raaco dhammaan tallaabooyinka nidaamka Inbox Zero ee runta ah. Waxaan si isdaba joog ah uga dhacaa gaariga aniga lafteyda waana inaan dib ugula hadlaa naftayda meel farxad leh oo ah email zen mararka qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal farsamo oo fudud oo ka imanaya nidaamkan oo aad si dhakhso leh oo fudud u hirgelin karto, oo u badan tahay inuu kuu fududeyn doono nolosha. Waxaa loogu yeeraa "mode offline".
Inta badan barnaamijyada emaylka casriga ah (sida Apple Mail, Outlook, iwm) waxay leeyihiin dejin loo yaqaan Qaabka qadla'aanta. Markii barnaamijkaaga iimaylka loo dejiyo habka qadla'aanta, ma jirto waraaqo cusub oo la soo qaadan doono sanduuqaaguna ma sii weynaan doono. Marka gobolkani karti yeesho, waxaad hadda xor u tahay inaad si caadi ah u iskaan u sameyso, u socodsiiso, ugana jawaabto emaylka adigoon dareemin inaad ku mashquulineyso warqadda soo socota.
Waxaan markii ugu horreysay ka fikiray arrintan dhawr sano ka hor anigoo duulaya. Duulimaadyo badan ayaa hadda bixiya wifi inta lagu jiro duulimaad laakiin inta badan, duulimaadka waxaa loola jeedaa in gebi ahaanba la jaray. Waxaan qaadan lahaa laptop-kayga markii aan duulayay waxaanan bilaabay inaan ogaado sida wax soo saarkeygu ahaa intii aan duulimaadku socday. Waan awooday inaan kajawaabo e-maylo badan iyo emayl badan maxaa yeelay igama mashquulin farriimaha imanaya. Waxa kale oo ay ahayd xiiso leh inaan internetka galo ka dib markaan soo degay oo aan maqlo qanacsanaanta "yaa!" 50 farriimood ayaa hal mar la wada dirayaa.
Ku-dhigida barnaamijka emaylkaaga qaabka khadka tooska ah wuxuu si fudud u muujinayaa isla waayo-aragnimadaas iyo waxsoosaarka waxsoosaarka laakiin leh gunno lagu daray oo kuu oggolaanaya inaad isticmaasho shabakadda iyo aaladaha kale isla waqtigaas.
Iskuday tijaabadan fudud: kahor intaadan xirin barnaamijka iimaylkaaga, u dejiso habka qad mar kasta. Kadib, markaad furto marka xigta, ku dadaal inaad ka jawaabto ama aad ka shaqeysid emayllo badan oo aad awoodid ka hor intaadan dib ugu dejin habka internetka. Ku hay tan ilaa toddobaad oo fiiri haddii aad bilawdo inaad si fiican u xakameyso emaylkaaga.
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo faallooyinkaaga hoosta!
Tags: Hubinta Nooca
Jan 25, 2011 saacadu markay ahayd 8:37 PM
Tani waa tilmaam cajiib ah! Si adag ayaan u shaqeeyey si aan u gaadho sanduuqa sanduuqa eber, laakiin way soo socdaan! LOL Waxaan haystaa caawiye hadda ka caawinaya codsiyada emaylka aasaasiga ah / su'aalaha, laakiin dhamaadka maalinta, cidina runti wax kuma wada qaban karto. Waxaan isku dayi doonaa tan oo waxaan fiirinayaa haddii ay waxtar leedahay. Waad ku mahadsan tahay iyo boostada weyn Mr. Reynolds.
Jan 25, 2011 saacadu markay ahayd 9:47 PM
Mahadsanid, Harrison! La socodsii sida ay wax u socdaan 🙂
Jan 27, 2011 saacadu markay ahayd 8:17 PM
Daminta otomaatig-helista waa lambarkayga koowaad, tallaabada ugu horreysa ee lagu caawinayo qof walba inuu kordhiyo waxsoosaarka emaylka.
Tani waxay u rogeysaa emaylka ciyaarta duullaanka booska (way soo socdaan!) Ciyaar kaligiis ah (qaado waqtigaaga si aad uga adkaato sagxadda.)